🥇 Fandaharana ho an'ny sekolin'ny fanatanjahan-tena
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 639
Fandaharana ho an'ny sekolin'ny fanatanjahan-tena
Lahatsary fandaharana ho an'ny sekolin'ny fanatanjahan-tena
Manafatra programa ho an'ny sekolin'ny fanatanjahan-tena
Miara-miasa amin'ny programa samihafa, manana fotoana mety hafangaro foana ianao, ary vokatr'izany dia mikorontana mora foana ny asan'ny sekoly fanatanjahantena. Izahay rehetra dia mitady programa iray amin'ny sekolim-panatanjahan-tena manerantany, izay mety hanana ny asan'ny kaontin'ny fanatanjahantena rehetra. Ny USU-Soft dia programa an-tsekoly fanatanjahan-tena, natao hiasa amin'ny asa maro samihafa izay tsy maintsy ampiasaina amin'ny asan'ny andrimpanjakana toy izany. Ny fitantanana ny sekolim-panatanjahantena dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanampian'ny fahafaha-manao maro sy ny asan'ny programa kaonty sy fitantanana, mifehy tanteraka ny hetsika tsirairay avy. Ny fahatsoran'ny fampiasana ny programa amin'ny sekolin'ny fanatanjahan-tena dia ao anaty interface tsotra, izay tsy hampiasa afa-tsy tabilao telo lehibe: modules, lahatahiry ary tatitra.
Ny fanaovana automatisation ny sekolim-panatanjahantena dia dingana lehibe amin'ny ho avy. Ao amin'ny sekoly ara-panatanjahantena dia mizara ny zavatra nataonao ho mahazatra sy indray mandeha, toy ny tatitra ara-bola isam-bolana. Mila fitandremana ny fitantanana ny sekolin'ny fanatanjahantena. Vantany vao nofenoinao ny fampahalalana ilainao dia fenonao mora foana ny fandaharam-potoana, ny drafitra na ny tatitra. Ny programa fitantanana sy fitantanana ny sekolin'ny fanatanjahantena dia mandeha ho azy. Rehefa namorona ny tahiry fampahalalam-baovao indray mandeha, dia hahazo kajy, drafitra na fandaharam-potoana mora foana ianao izay ataon'ny programa fanaraha-maso mandeha ho azy ao anatin'ny iray segondra! Voamarina ny fifehezana ny sekolim-panatanjahantena rehefa manomboka mampiasa an'ity programa fanaraha-maso kalitao ity sy fampivoarana ny orinasa ianao. Ny programa amin'ny sekolin'ny fanatanjahantena no lasa mpanampy lehibe amin'ny fanapahan-kevitrao sy ny hetsika ataonao! Tsy misy zavatra sarotra amin'ny fitantanana ny sekoly ara-panatanjahantena miaraka amin'ilay programa. Ny rafitry ny kaonty USU-Soft dia manampy anao hiatrika ny fandaharam-pianarana sekolim-panatanjahantena tsotsotra, haingana!
Mampiasa ny programa solosaina tsy eo an-toerana ihany koa ianao, fa amin'ny alàlan'ny tamba-jotra. Ilaina ho an'ny mpitantana sy ny mpiasa izany - mitambatra ny hetsiky ny tamba-jotra, ary mifandray amin'ny tahiry ary manatanteraka ny asa na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ny olona rehetra dia afaka miasa amin'ny programa noho ny zava-misy fa ny antsipiriany rehetra amin'ny interface interface dia eritreretina. Ny fandaharam-pianarana ho an'ny sekoly ara-panatanjahantena dia azo noforonina araka ny eritreritrao manokana - misy mihoatra ny dimampolo lohahevitra kanto misy. Ny fanatsarana ny sarin'ny orinasa dia voalamina mora foana raha manapa-kevitra ny hametraka ity programa fitantanana kaonty fitantanana ity ianao. Izy io dia miantoka ny fisian'ny, ny marina ary ny fahafenoan'ny fampahalalana rehetra ary manamora ny fifehezana ireo karazana fampiofanana sy fampihetseham-batana amin'ny toeram-pitsaboana. Ny tatitra ara-bola momba ny orinasanao dia manampy amin'ny fandrafetana ireo hetsiky ny fikambanana ary handrisihana ny mpiasa ao amin'ny departemantan'ny varotra. Ny automatique dia manampy amin'ny fisorohana ireo hadisoana mahatsikaiky mifandraika amin'ny fitaoman'olombelona, ary mampitombo ny fahombiazan'ny fitantanana. Manatanteraka drafitra sy fanaraha-maso ao amin'ny orinasanao, tena ilaina ny miasa miaraka amin'ny sary famantarana. Ny sary famantarana ny orinasanao dia azo apetraka ao amin'ny varavarankely lehibe amin'ny rafitra, ary haseho amin'ny tatitra sy antontan-taratasy rehetra izay noforonina sy natao pirinty tamin'ny alàlan'ny USU-Soft. Ny fampiharana dia manampy ny sary famantarana sy ny antsipirian'ny foibem-panatanjahan-tena amin'ny tatitra tsirairay, noforoninao. Ny rafi-pitantanana dia manana interface multi-windows ary mora ampiasaina.
Rehefa miasa miaraka amin'ny USU-Soft ianao dia afaka mifamadika eo anelanelan'ny varavarankely amin'ny alàlan'ny takelaka izay hita eo ambanin'ny efijery. Manolotra toetra toy ny fampahalalana sy ny fahafaha-miasa amin'ny sehatray izahay. Azonao atao ny manafina ny tsanganana tsirairay amin'ny latabatra tsirairay miaraka amin'ny tsindry roa mba hahatonga ny asanao hahazo aina kokoa sy hanala ireo habaka izay tsy ampiasainao. Ny programa automatisation ny fanaraha-maso ny mpiasa sy ny fahombiazan'ny fahombiazana dia ahafahan'ny mpampiasa manova mora ny filaminan'ny tsanganana - izany dia ataon'ny tarika mahazatra ary alatsaka miaraka amin'ny kôkôry amin'ny totozy. Ny fampiharana dia afaka manitsy mora foana ny sakan'ny tsanganana. Ny rindrambaiko dia azo ampiasaina amin'ny tanjona marketing - ao amin'ny sehatr'asa dia tsy ny logo ihany no azonao ovaina fa ny anarana, antsipiriany ary mombamomba anao koa. Miaraka aminy dia azonao atao ny manangona fotoana amin'ny famenoana ny karatry ny mpanjifa - adika fotsiny ilay fidirana izay tsy mitovy kely amin'ilay ilainao hidirana, ovao ny saha takiana ary tehirizo. Ao amin'ny menio lehibe, ny mpampiasa dia mahita fizarana lehibe telo - Reports, Modules, Directories.
Ny lahatahiry dia fenoina indray mandeha, ny tatitra dia ampiasain'ny mpiasan'ny fitantanana (mpitantana na mpitantana), ary ny Modules dia ampiasaina amin'ny asa isan'andro. Ny isan'ny taranja noforonina tao amin'ny rafitra dia voafetra ihany amin'ny alàlan'ny fahatsiarovana sy ny fahaizan'ny toeram-panatanjahanao. Ho avy ny mandeha ho azy! Ary mba ho lasa mpifaninana bebe kokoa ary hialana amin'ireo mpifaninana rehetra, ny orinasanao dia mila programa tsara handraisana andraikitra amin'ny hetsika rehetra atao ao amin'ny orinasanao. Manoro hevitra anao izahay ny programa USU-Soft, izay ekena ho iray amin'ireo programa tsara indrindra amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
Mba hahatsapana fahasambarana sy tanjona amin'ny fiainana dia tokony hanao ireo zavatra mampiala sasatra azy ary mampitony ny sainy izany. Ireo zavatra ireo dia mety ho samy hafa, saingy misy iray, na izany aza, izay manerana an'izao tontolo izao ary azo lazaina momba ny olona rehetra manerantany: fanatanjahan-tena amin'ny fanatanjahantena. Mahatonga antsika hahatsapa ho velona sy mifehy bebe kokoa ny vatantsika. Satria misy gym maro ankehitriny, ity sekoly fanatanjahantena ity dia mila zavatra hanome azy ny tombony sy ny tombony rehetra. Ny USU-Soft dia mety ho lasa iray amin'izy ireo, satria ireo toetra rehetra ilaina amin'izany.
Fanatanjahantena sy hetsika
Kaonty ho an'ny klioba mari-pahaizana
Kaonty ho an'ny sekoly fanatanjahan-tena
Kaonty ho an'ny kilasim-pianarana amin'ny sekoly fanatanjahan-tena
Kaonty ho an'ny fanatanjahan-tena
Kaonty ho an'ny dobo
kaonty amin'ny foibem-pahasalamana
Accounting Journal momba ny lesona fanatanjahan-tena
Kaonty amin'ny fanatanjahantena atletisma
Fandraisana an-kaonty lesona
Kaonty amin'ny tapakila tapakila
Fandaharana kaonty ho an'ny fahasalamana
Automation ho an'ny klioba fikomiana
Fanaraha-maso ao amin'ny sekoly fanatanjahan-tena
Fifehezana ny orinasam-panatanjahantena
Fifehezana ny fiofanana
Ny fifehezana ny klioba Fitness
Diarin'ny kaonty lesona momba ny vondrona
Fitantanana klioba gasy
Fitantanana ny klioba fanatanjahantena
Fandaharana ho an'ny kaonty amin'ny klioba mari-pahaizana
Fandaharana ho an'ny klioba miady
Fandaharana ho an'ny klioba maharitra
Fandaharana ho an'ny efitrano fanaovan-jaza
Fandaharana ho ivotoerana fanatanjahan-tena
Fandaharana ho an'ny klioba fanatanjahantena
Fandaharana ho an'ny ivon'ny ankizy
Fandaharana ho an'ny klioba ankizy
Program ho an'ny karatra plastika
Fandaharana ho an'ny fifehezana dobo
Fandaharana ho an'ny tapakilan'ny vanim-potoana
Program ho an'ny fikambanana ara-panatanjahantena
Fandaharana ho an'ny fizarana fanatanjahantena
Fandaharana ho an'ny karatra ataon'ny klioba
Fandaharana ho an'ny gym
Fandaharana ho an'ny dobo
Program ho an'ny sekoly fanatanjahan-tena
Fandaharana ho an'ny kaonty workout
Programa momba ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena
kaonty club fanaovana fanatanjahan-tena
Fandraisana an-tanana fitantanan-draharaha
fitantanana sarotra fanaovana fanatanjahan-tena
Kaonty fikambanana momba ny fanatanjahan-tena
Fandraisana fitantanana sekoly
Mampiasa karatra plastika